Shiinaha: Hoos ku dhac sicirka saamiyada - BBC News Somali
Shiinaha: Hoos ku dhac sicirka saamiyada
7 Jannaayo 2016
Image caption Suuqa saamiyada shirkadaha ee Shiinaha.
Kaddib hoos u dhicii qiimaha saamiyada ee waddanka Shiinaha sanadkii la soo dhaafay, mas'uuliyiintu waxay iskudayeen inay sare u qaadaan qiimaha saamiyada, iyagoo ka baqaya hoos u dhac kale, waxay ka hortageen iibinta saamiyo fara badan ee hay'adaha waaweyn ee Shiinaha.
Tallaabooyinkaas qaarkood waxaa waqtigoodu ku egyahay maalinta Jimcaha ee berrito ah. Waxay kaloo sameeyeen xeer sheegaya in 5% iyo wixii ka badan ee hoos u dhac ku yimaad qiimaha saamiyada ay keeni doonto in la joojiyo ganacsigaas.
Taasi waxay dhacday maalintii Isniintii iyo haddana maanta. Maalintii Isniintii, warbaahinta rasmiga ah waxay sheegtay inay ahayd dhacdo naadir ah, haatanse, waxay soo noqotay muddo saddex maalmood kaddib ah.
Shiinuhu waxay kaloo kharash-gareeyeen 20 bilyan oo dollar toddobaadkan, iyagoo iskudeyaya inay sare u qaadaan qiimaha iyo heerka sarrifka. Mas'uuliyiinta shuuciga ah waxaa laga yaabaa inay la legdamayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen suuqyo faraha laga qaad ah oo hantigoosad ah oo iska dhegatiraya sida ay dowladdu rabto.